नोटलाई माया नगर्ने हामी नेपाली। « Light Nepal
Published On : 29 October, 2018 8:17 pm
लोकल बस स्टेशनमा बस कुर्दै थिएँ ।डिजिटल बोर्डमा बस आईपुग्ने समय २० मिनेट देखाएको थियो। सत्तरी उमेर नाघेका जस्ता देखिने कोरियन बज्यैहरु नजिकै थिए। विदेशी मान्छे हो भनेर बुझेपछी कोरियन भाषामा पैसा कति कमाउँछस्,? मेहनत गरेर काम गर, पैसा धेरै कमाउ, घरमा बाआमालाई पठाउ, विहे गरेको छ कि छैन? श्रीमतीलाई मात्रै धेरै पैसा नपठाउ । गर्लफ्रेण्डलाई पैसा नपठाउ । आफ्नो लागि साँच, घर किन, पैसा जम्मा गरेर व्यापार गर । यस्तै यस्तै प्रश्न र अर्ती दिदैं थियो।
मेरो हातमा गाडी भाडा तिर्ने हजारको नोट र सय सयका ३ वटा सिक्का पैसा थियो। मैले गफको क्रममा नोटलाई कहिले बटारेर सानो सुइरो जस्तो बनाउने, कहिले के कहिले के बनाउँदै रहेछु। त्यतिबेलै ति बज्यैले मलाई पैसालाई किन त्यसो गरेको? त्यसो नगर, पैसाको माया लाग्दैन? भनिन् । म नाजवाफ भएँ र माफ गर्नुहोला भने।
साच्चै हामीले पैसालाई माया गर्ने तर नोटको जतन नगर्ने रहेछौं । हाम्रो सानोतिनो जस्तो लाग्ने लापरबाहीले राज्यलाई कति ठूलो घाटा हुने रहेछ हामीले त्यो ख्याल गर्दैन रहेछौं । नोट जति छिटो च्यात्तियो, थोत्रियो त्यति नै राज्यलाई त्यसको सट्टा अरु नोट छाप्नुपर्दा राज्यको दायित्व बढ्दो रहेछ।
हाम्रो देशमा त कतिपय यस्ता संस्कार, परम्परा जस्तो पनि छ पैसालाई सिलाएर माला बनाउने र बेहुला बेहुली, लोकन्दा, लोकन्दीलाई लगाई दिने। त्यसरी सिलाएको र स्टापलर लगाएको नोट प्वाल पर्ने नै भयो। छिटो थोत्रिने र च्यातिने हुने नै भयो ।
दशैँको अवसरमा नयाँ नोट टिका लगाएर दिने चलन छ, ति नोटहरु टीकामा भिज्ने र रङ्ग लाग्ने हुदाँ छिटो पुरानो हुने र च्यातिने हुने नै भयो। यसरी दशैँ को अवसरमा नयाँ नोट छाप्दा मात्रै राज्यलाई ७९करोड भार पर्ने समाचार पनि आएकै थियो।
अझ केही समय अगाडी सम्म त नोटको हिफाजत गर्नुपर्ने बैकंले समेत उप्काउनै गाह्रो हुने गरी स्टिज ठोक्ने गर्न्थ्यो । देशको नयाँ कानुनले नोटमा केरमेट गर्ने, लेख्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न नोटमा लेख्न नपाउने कानुन पनि ल्याएको छ। नोटमा केरमेट गर्नेलाई कारबाही हुने भन्ने समाचार आएपछि “खुलेआम बलत्कार गर्नेलाई केही गर्न सक्दैनस् सरकार नोटमा लेख्नेलाई कसरी समात्छस्”! भन्ने लेखेर सरकारलाई च्यालेन्ज दिन्छ र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाउँछ ।
साच्चै, सानातिना कुरामा पनि हाम्रो चेतना कति पछाडी छ।